Izindaba neNhlangano, Amasiko
Nsuku zonke, izinkulungwane zamagama ezivela emvelaphi angaphandle ziza kithi, eRussia ebanda kodwa enhle kakhulu futhi enobungane, ezinye zazo zisekelwe kakhulu. Yiqiniso, kuyinhle ukubuka indlela abantu abahambisa ngayo imishwana ye-English, uma ngabe ulimi lwendabuko lunikeza ukuhumusha cishe noma yiziphi izitatimende.
Noma kunjalo, kukhona okungafani okuthakazelisayo. Akuyona imfihlo ukuthi i-intanethi ingene kuyo yonke indawo, futhi manje nje umuntu ovilaphayo noma ojabulayo akazi ukuthi inethiwekhi yomphakathi iyini. Ngakho-ke, empeleni, futhi siphile zonke izinhlobo zama-acronyms, enye engangifuna ukukhuluma ngayo ngaphezulu. Lapho ngibona okokuqala izwi elingavamile emlayezo, angizange ngiqonde ukuthi lol wayesho ukuthini. Mhlawumbe u-typo? Cha, akunjalo.
Ngakho, u-lol uhleka ngokuzwakalayo, okuhunyushwa ngokuthi "ngokuzwakalayo nangokuzwakalayo", ezinye izinto ezihlukahlukene zingenzeka. Yiqiniso, ngesiRussia ayikho igama elilodwa elifushane lokuveza injabulo. Asazi kanjani, sidinga ukuchaza ngokugqamile nangemibala, futhi lol iyindlela enjalo yokuveza ukuzwakalisa kumxhumanisi wakhe ekuhlekeleni kwakhe, ukudumisa umphikisi wokuzihlekisa futhi, okubaluleke kakhulu, ukuba kuqondwe! Manje abantu abasha banomlutha ngokweqile ngezifinyezo - kusindisa isikhathi.
Kodwa-ke, naphezu kwenkolelo yokuthi njalo lesibili umkhaya wethu uyazi ukuthi kusho ukuthini iL lol, futhi ukhohlwa amazwi angamazwi amancane, ngithemba ukuthi akuwona konke okubi kakhulu. Futhi nganginenhlanhla. Kwabe sekuthi emva kokuvota isayithi elidumile, izibalo ezilandelayo zitholakale: kumazwi angu-11,718 aqukethwe emilayezo engu-2,185, uLol wasetshenziswe izikhathi ezingu-76 kuphela, okuyinto ngamaphesenti angu-0.6 engqikithi. Iyajabulisa.
Kodwa kuthiwa "lol" aziwa kuphela ngamaMelika. Isibonelo, eHolland, usebenzisa leli gama, kusho ukuthi kuyamnandi. Futhi ngesi-Welsh itjhugulula njengemfucumfucu, imfucumfucu, imfucuza.
Ngaphezu kwalokho, kukhona ngisho namafilimu ambalwa anegama elifanayo. Owokuqala uvela eFrance, etshela indaba yabasha abaphila ngokugcwele, njengoba sekubizwa manje, baxazulule izinkinga zabo, bazijabulise futhi bangacabangi ngekusasa. Lokho kusho ukuthini kulomongo? Igama lokuqala. Yebo, yilokho abangani abaphendukela ku-heroine oyinhloko, abahamba bekhohliswa yinsizwa yakhe, kodwa igama lakhe lesidlaliso alimvumeli ukuba alangaze ukudabuka (Lol - Rzhunimagu).
I-America, emva kweminyaka engama-4, nayo yanquma ukudonsa bese idutshulwa isithombe ngegama elifanayo, elisehhovisi lebhokisi laseRussia lakhunjulwa hhayi njengesifingqo, kodwa njengengqikithi enhle futhi edidiyelwe - "Ihlobo. Ofunda nabo. Uthando. "
Iziqephu zisho cishe - azikho izigcawu eziqhakazile nezinguquko ezingalindelekile. Kodwa-ke, ifilimu yokugcina ihlukaniswa ngokuba khona komdlali ophawulekayo endimeni yomama kaLola - uDemi Moore. Le ntombazane nayo yadlala ngumculi omncane odumile uMily Cyrus.
Phakathi kwezinye izinto, ukuthini i-lol kusho ukuthandwa kwabathengi bekhompyutha? Ingabe uthanda lokho? Khona-ke kusengaphambili usukwazi ukuthi yini esengozini. Yebo-ke, mayelana ne-League of legend, eyaqala ngo-2009 futhi yabamba ama-expanses amakhulu e-intanethi.
I-Warcraft 3 umhleli uye wafaka imibono eminingi ethandekayo kulo mdlalo, kodwa abathuthukisi ngokwabo akunakwenzeka ukuthi bafune ukukhawulela ukusikisela kwabo, ikakhulukazi njengoba sebevele behamba phambili. Njengoba i-amateur ingitshele ukuthi ngidlale kulezi zinsuku ezitholakala embonini, kuphela eLol kukhona amaqhawe amasha ahlukile ngamakhono amangalisayo. Angikaze ngidlale imidlalo, ngibheka ukukhulumisana okuphilayo njengomngane ohamba phambili empilweni, kodwa nokho, yikuphi "lol" kulo mongo, senzeke futhi.
Mhlawumbe kunezinye izincazelo zalesi siqeshana, kodwa sizogxila kulabo abathandwa kakhulu. Ngakho, kusho ukuthini lol? Okokuqala, i-smiley ebonisa isimo sengqondo esihle ngokuqondene nalokho okwenzekayo, ukuvunywa. Okwesibili, igama lamabhayisikobho ongawabuka abalandeli bezithombe ezilula, futhi, okwesithathu, umdlalo owawunqoba ingxenye yezwe eminyakeni emithathu.
Ngakho manje i- "lol" ichazwa ngumngane we-intanethi, futhi ngokushesha, mhlawumbe, kuzochazwa izincazelo ezintsha ezingacacile, ekuboneni kuqala, ukunciphisa.
Isikhumbuzo seTatischev ne-Gennin, e-Ekaterinburg: amaqiniso omlando
Umuntu we-Renaissance: umuntu ngamunye
Lapho "Maynkraft" nezinye amaqiniso mayelana umdlalo
Salmon Pink ephekwe eziko nge amakhowe: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Ukulinganisa izingubo: isisekelo sephethini yokugqoka
Nezifo zesisu: izimpawu, ngezigaba
Ukwakhiwa nokuxhumana izindlela zesimanje HDD Drilling